बेस्सरी टाउको दुख्यो ? तनाव कम गर्न अपनाउनुस् यी ६ उपाय
काठमाडौं -शारीरिक श्रमको कमी, तनाव, बदलिएको व्यस्त जिन्दगीका कारण मानिसहरुमा टाउको दुखाइको समस्या पछिल्ला दिनहरुमा बढिरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
कागती र तातो पानी
लगातार टाउको दुखिरहन्छ भने एक ग्लास तातो पानीमा कागतीको रस मिसाएर पिउनुहोस् । किनभने धेरैपटक पेटमा ग्याँस बनेका कारण पनि टाउको दुख्ने गर्दछ र कागती पानीले ग्याँसको समस्या हल गर्नुका साथै टाउकोको दुखाई पनि कम गर्दछ ।
बिहान खाली पेटमा खान हुँदैन यी चीज, जसले हानी प...
यी हुन् क्यान्सर गराउने खानेकुरा, पोलेको मासु सबभन्...
अर्थमन्त्रालयको प्रष्टोक्ति– स्यानिटरी प्याडमा कर थपिएको छैन
ब्रेन ट्यूमरका यी लक्षणलाई नगर्नुस् बेवास्ता
यी हुन् क्यान्सर गराउने खानेकुरा, पोलेको मासु सबभन्दा घातक
टन्सिलले हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् समाधानका घरेलु उपाय
कपाल हेरेर पनि थाहा पाइन्छ रोगको बारेमा, यस्ता छन् संकेत
मकवानपुरबाट गाँजा बरामद